ငါ web 3.0 ကိုယုံ! | Martech Zone
ဤဆလိုက်သည်ကျွန်ုပ်၏နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများ၏ရှေ့မှောက်၌ပြသသောအခါညည်းသံနှင့်ညည်းသံများထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ငါပြသရမယ် အတိတ်ကာလ၌ဝဘ်ပေါ်တွင်အလွန်သတိပညာလှုပ်ရှားမှုများရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ က်ဘ် ၀.၀၀ ရှိခဲ့ပြီးအခြေခံအားဖြင့်စာသားနှင့်ကြော်ငြာဘုတ်များဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ရက်ကာလကိုသတိရပါလား သင်၏ 0.0 baud modem ဖြင့်လိုင်းတစ်ခုချင်းစီလွင့်တင်ရန်ပုံကိုစောင့်နေသည်။ (ဟုတ်တယ်၊ ငါအိုပြီဆိုတာသိတယ်။ )
Web 1.0 သည်အမှန်တကယ်တွင်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းခေတ်ဖြစ်လာသည်။ AOL (သော့ချက်ထည့်ပါသတိရပါ) CHEVY) ကွန်ယက်ကိုကြီးစွာချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဂိတ်ဝေးဆိုဒ်များ ပို၍ များလာသည်။ အကယ်၍ သင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုသင့်အားရှာဖွေစေလိုပါကဒေသဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင်နဖူးစည်းစာတန်းနှင့်သင့်အတွက်အလွန်ကုန်ကျသည်။
Web 2.0 သည်ထိန်းချုပ်မှုခေတ်တစ်ခုဖြစ်နေသေးသော်လည်းယခုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များဖြစ်သည် Googleဝဘ်အသွားအလာကိုပိုင်ဆိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့ Web 2.0 တွင်ရှိနေသေးသည် - သင့်ဆိုဒ်ကိုရှာတွေ့ပါက၎င်းကိုသင်ရှာဖွေမှုရလဒ်အနေနှင့်ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လူမှုကွန်ယက်သည်ယခုပင်ပေါ်ထွက်လာနေသည် ရှေးရှေးစုဝေးနေကြသည်နှင့် Bookmarks များကိုမျှဝေခြင်း ဖြတ်. micro-blogging application များ နှင့်လူမှုရေး bookmarking ။
peer-to-peer ဖိုင်မျှဝေမှုကျဆင်းခြင်းကိုလည်း Web 2.0 တွင်တွေ့ရသည်။ ပန်းချီဆရာ ဖြိုဖျက်ခံရပြီးဟက်ကာများ၊ အက်ကွဲများနှင့်သူခိုးများမြေအောက်သို့သွားခဲ့ရသည်။ 'Pirate Bay မှတဆင့်အမည်မသိ proxy server များနှင့် torrents' သည်အင်တာနက်၏ဈေးနှုန်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်အခမဲ့ဖြစ်ခြင်းသည်ရှေ့တန်းသို့တက်သွားခဲ့သည်။
Web 3.0 = ကျဆင်းနေသော Search Domain
Web 3.0 နောက်တစ်ခု, ငါကနောက်တဖန်အားလုံးတောရိုင်းအနောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်! ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကလူများသည်လူများစုစည်းရန်၊ စုစည်းခြင်း (Semantic Web)၊ micro network များနှင့်အော့ဖ်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းတွင်ပါဝင်သောပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်းများမှတစ်ဆင့်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေခြင်းဖြင့်သတိပြုပါ။ မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှု.
Web 3.0 = ခိုးကူးမှု
ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒမှာခိုးကူးမှုသည်ကြီးမားသောခုန်နိုင်သည့်ခုန်နှုန်းမြင့်စေသောအိမ်ကွန်ယက်များမှ IP လိပ်စာများမှတစ်ဆင့်စစ်မှန်သော peer-to-peer အပြောင်းအလဲသည်ပုံမှန်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှကြီးမားသောခုန်ပျံမှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ Napster လက်ထက်၌ peer-to-peer ဟူသည်အမှန်တကယ် peer-to-Napster-to-peer ကိုဆိုလိုသည်။ Napster ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုများအတွက်တံခါးပေါက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အလောင်းအစားသည်မိုက်ခရိုကွန်ယက်များဖြစ်သည်။ သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းများကိုစိတ်ချရသောသူငယ်ချင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးမည်သည့်ဆာဗာမဆို (သင်၏ ISP ပြင်ပ) မသိဘဲဖိုင်များပို့နိုင်သည်။ သို့သော်ဖိုင်များသည်အလွန်ခက်ခဲသောစာဝှက်သည့်နည်းများဖြင့်အသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါ။
တစ်နည်းပြောရလျှင်ယနေ့ခေတ်ကျောင်းသားများအကြားစီဒီများနှင့်တေးသီချင်းများကိုအများအားဖြင့်မျှဝေခြင်းသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမရှိဘဲမျှဝေခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့်အပလီကေးရှင်းများသို့ပြောင်းသွားလိမ့်မည်။ အစိုးရအပေါ်ဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမှဖိအားပေးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ကွန်ရက်များကိုသူလျှိုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဤပင်လယ်ဓားပြများ၏လှိုင်းသစ်ကိုခြေရာခံရန်နှင့်အပြစ်ပေးရန်ကြီးမားသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ကံကောင်းပါစေ!
Web 3.0 = တိုက်ရိုက်ကြော်ငြာခြင်း
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကြီးစိုးမှုကျဆင်းလာခြင်းနှင့်အတူ 'ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲသော' ကြော်ငြာပေါ်ပေါက်လာမှုသည်လည်းကြီးထွားလာလိမ့်မည်။ Google သည်ကြော်ငြာရှင်များနှင့်ကြေငြာသူများအကြားငွေပေးငွေယူကိုဖြတ်တောက်ပစ်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ နည်းပညာအသစ်များအနေဖြင့်ကြော်ငြာရှင်များကသူတို့လိုချင်သောကြေငြာသူများထံမှသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
Tags: semanticဝဘ် 3ဝဘ် 3.0
ဧပြီ 29, 2008 မှာ 2: 08 AM
web3ဖြစ်မည့်ခေတ်သစ်၌ပင်လယ်ဓားပြနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားပါသည်။
ယခုအပတ်တွင်ပင် MS သည်သူတို့၏ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူကြီးမားသောဘောင်းကိုထုတ်ယူလိုက်သည်
လျှောက်လွှာအများစုအားဖြင့်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီးသင်၏အသစ်သော BBO ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်သင်၏ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုမှုအတွက်ငွေပေးချေရန်သဘောတူသည့်အတွက်ကွန်ပျူတာအသစ်တစ်ခုနီးပါးအခမဲ့ဖြစ်တော့မည့်နေ့ကိုမြင်နိုင်သည်။
ငါ streaming အာကာသအတွင်းကုမ္ပဏီများ၏ရုန်းကန်မှုများကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြနှင့်ကြိုးပမ်းမှုနည်းပညာအကြံပြုအဖြစ်, သူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာ jukebox အိုင်တီ depts နှင့်လက်လီ software ကိုဆိုင်များတွင်များအတွက်အဓိကသေဆုံးသူဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ဧပြီ 29, 2008 မှာ 10: 42 AM
၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲမှတစ်ဆင့်ခိုးကူးမှုပြbနာကိုသတ်ပစ်နိုင်သည်။ ငါပင်လယ်ဓားပြများအကြောင်းဆွေးနွေးနေစဉ် - ကျွန်ုပ်သည်တေးဂီတ၊ ဗီဒီယိုစသည်ဖြင့်မီဒီယာကိုသာကန့်သတ်ထားသည်ဟုဆိုလိုသင့်သည်။
ဧပြီ 29, 2008 မှာ 6: 54 AM
မကြာသေးမီက Web 3.0 သည်မည်သည့်အရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ post ကိုအချိန်မီဖြစ်ပါတယ်။ iTunes မှပြသသောအချက်အလက်များအရ 'paid in' အတွေ့အကြုံသည်ပင်လယ်ဓားပြများ၏အတွေ့အကြုံထက်သာလွန်ပါကလူများသည်အကြောင်းအရာနှင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ကျဉ်းကျယ်သော ၀ ယ်မှုများအား ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။ (iTunes သည်ယူအက်စ်တွင်နံပါတ် ၁ ဂီတလက်လီအရောင်းဆိုင်ဖြစ်သည်။
pirate content သည် 'လူသားအခြေအနေ' အဆင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သို့သော် Apple ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီများသည် web 3.0 နှင့်ဘာတွေလုပ်နေမည်ကိုသင်ထင်လိုသည်ကိုသိလို။ ၎င်းတို့သည် 2.0 ကိုစတင်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်!
ကျွန်ုပ်သည်ကျိုတိုမြို့တွင်အခြေစိုက်ထားသည့်မြို့နှင့်ပတ်သက်သောစားသောက်ဆိုင်ဘလော့ဂ်တစ်ခုရေးသားခဲ့သည်။ ငါလွန်ခဲ့သော 8 လကစတင်ခဲ့သည်။ ငါသည်သင်တို့၏ site ကိုရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်ကာလအတွင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုးတက်ပါပြီ။ အခုငါကအချိန်ကိုအဓိကစေချင်တဲ့အထိပါပဲ။ ကျနော်တို့အခုအနည်းငယ်မြှင့်တင်ရေးစစ်တမ်းလုပ်နေတာနှင့်ကြီးသောအတွေးအခေါ်များအတွက်ဆုထုတ်ပေးနေကြသည်။ သင်ကြိုက်လျှင်အနားယူပြီးအစားအစာကိုစစ်ဆေးပါ။ ငါးတွေခေါင်းတုံးတုံးဖြစ်သွားပြီ၊ ပူပြင်းတဲ့အတွက်အဆိပ် pufferfish တောင်တွေကစိုစွတ်နေတယ်။
ဒီမှာကြည့်ပါ။ KyotoFoodie 'Win Junk' စစ်တမ်း။
Web 3.0 သည် 'Wild West ကိုတစ်ဖန်ပြန်သွား' တော့မည်လော။ Ummm! ငါမစောင့်နိုင်ဘူး !! ယူလာခဲ့ပါ!!!
ငါသည်သင်တို့ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်စိတ်အားထက်သန်, သင်တို့၏ဘာသာရပ်လိုင်းများစိတ်ကူးများကိုချစ်! အလွန်ဆွဲဆောင်မှု!
ဧပြီ 30, 2008 မှာ 9: 18 pm တွင်